Tsy ny filoha Jair Bolsonaro ihany no miaro ny fampiasana ny ankizy—mihevitra ireo Breziliana manankarena fa tsara ihany koa izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2019 7:26 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Español, русский, Português, عربي, Italiano, Français, English
Ankizy miasa ao amin'ny toeram-pako ao Brezila. Sary: Marcello Casal Jr, Agência Brasil, nahazoana alalana miaraka amin'ny anaran'ny naka azy ny famoahana.
Tamin'ity indray mitoraka ity ny filoha dia nilaza fa fony izy teo amin'ny 9 na 10 taona teo, dia nitoto katsaka sy namboly akondro teny amin'ny sahan'ny rainy izy, ary manamafy ny zava-misy fa “tsy nanimba azy izany.” Notantarainy ihany koa ny fomba nianarany nitondra traktera sy nampiasa basy voalohany teo amin'ny fiainany ary nofaranany tamin'ny filazana fa ny hany antony tsy hampidirany tetikasa manameloka ny fampiasana ankizy dia satria mety hovonoina noho izany izy.”
Milaza ny lalàna Breziliana fa voaràra ho an'ny ankizy latsaky ny 13 taona ny endrika asa rehetra. Manomboka 14 taona, afaka miasa toy ny mianatra asa ny ankizy ary voaràra ny asa alina sy ny asa mampidi-doza. Ireo zatovo mihoatra ny 16 taona ihany no afaka manasonia fifanarahana.
Na dia nilaza aza ny filoha fa tsy nikasa hanolotra fanovana ho an'ireo lalàna intsony izy, nanjary lohahevitry ny adihevitra tao amin'ny media sosialy Breziliana nandritra ny herinandro taorian'ny fanamarihana nataony kosa ny fampiasana ankizy.
Nitantara ny traikefany manokana tamin'izy ankizy niasa ilay mpitsara federaly Marcelo Bretas, izay miasa ao amin'ny fanasana fiara ao Rio de Janeiro, sady voalaza fa mpanohana an'i Bolsonaro, tao amin'ny valim-panontaniana tamin'ny resadresaka natomboky ny zanakalahin'ny filoha, depiote federaly Eduardo Bolsonaro :
Tamin'izaho 12 taona, tamin'ny taona 1982, nanana fifanarahana vita sonia, nanomboka niasa taminà magazay kelin'ny fianakaviana aho. Nanana andro niasàna aho ary asa tanterahana, ary nahafantatra ny hasarobidin'ny mahazo karama farany ambany aorian'ny iray volana niasana dieny mbola kely. Tena mirehareha amin'izany aho!
Bia Kicis, mpampanoa lalàna federaly teo aloha sady depiote federaly ankehitriny miaraka amin'ny antoko politikan'ny filoha, nizara ny fahatsiarovany ihany koa:
Tamin'izaho 12 taona, zatra nanamboatra brigadeiro [desera Breziliana] sy nivarotra izany tany am-pianarako aho. Ny tena nahaliana dia tsy nila izany aho, saingy nahafinaritra ahy ny nandoa ny fianarako tennis avy amin'izany vola izany. Nahatsiaro tia mamorona sy tia mamokatra aho.
Mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny famaritan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny asa – International Labour Organization (ILO) [na OIT amin'ny teny frantsay] ny “fampiasana ankizy” izany. Araka ny voalazan'ny ILO (OIT), ny fampiasana ankizy dia asa “manaisotra ny fahazazan'ny ankizy, ny mety ho zava-bitan'izy ireo, sy ny fahamendrehan'izy ireo, ary mampidi-doza amin'ny fivoarana ara-batana sy ara-tsaina. “Nampiany ihany koa fa manondro izay asa “manelingelina ny fianaran'izy ireo” ny fampiasana ankizy.”
Tsy fampiasana ankizy ny manampy ny renibenao manasa lovia indray mandeha isa-kerinandro.
Saranga sy tsy fahafantarana
Milaza ny Ivon-toerana Breziliana momba ny Jeografia sy ny Antontanisa (IBGE) fa ankizy sy zatovo eo amin'ny 2,5 tapitrisa eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 17 taona ankehitriny no miasa ao amin'ny firenena. Milaza ny Biraon'ny Fampanoavam-panjakana fa maharay fitarainana eo amin'ny 43.000 mifandraika amin'ny fampiasana ankizy isa-taona eo izy.
Ny fahantrana no antony voalohany amin'ny fampiasana ankizy, hoy ilay Breziliana mpahay toekarena Monica de Bolle tao amin'ny resadresaka malaza tamin'ny Twitter. Nilaza izy fa, na dia manampy ny fianakaviana kely fidiram-bola aza ny ankizy miasa ao anatin'ny fotoana fohy, dia misakana ny vokatra sy ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny firenena, ary mampidi-doza amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy izany amin'ny jery lavitra ezaka.
Ny firenena izay matetika mampiasa ankizy dia toa ireo firenena mahantra indrindra. Mampihitsoka azy ireo ao anatin'ny fahantrana sy ny tsy fandrosoana ny [fampiasana ankizy].
Manamafy izany ihany koa i De Bolle, fa raha toy ny manampy amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana ao anatin'ny fotoana fohy ny fampiasana ankizy, dia mety hanalalina kosa ao anatin'ny fotoana maharitra satria mampiditra ireo ankizy sy ny olon-dehibe ao anatin'ny fahantrana. Misy ihany koa ny porofo, hoy izy, fa mampitombo ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy ny fampiasana ankizy sy ny asa tsy misy karama.
Nampiseho ny adihevitra tamin'ny aterineto fa samy manana ny fahazoana ny dikan'ny hoe “asa” ny saranga sosialy samihafa any Brezila. Nilaza ny kaonty Twitter ofisialin'i Tortura Nunca Mais (“tsy mila fampijaliana intsony” amin'ny teny paortiogey), vondrona mpiaro ny zon'olombelona niforona taorian'ny fiafaran'ny didy jadona miaramila (1964-1985) notohanan'i Etazonia fa:
Ny fitoviana misy tamin'ireo fijoroana vavolombelona reharehan'ny olona izay “niasa” fony izy ireo ankizy raha jerena antsipirihany dia ny niasany tao amin'ny orinasan'ny fianakaviana (magazay kely, orinasan'ny rainy, sns) izany. Mitovitovy kokoa amin'ny raharaha ao an-tokantrano izany fa tsy fampiasana ankizy velively.
Ity sary avy amin'ny mpaka sary João Roberto Ripper ity dia mampiseho zazalahy iray miasa amina toeram-pitrandrahana arina any amin'ny toeram-piompiana any Ribas do Rio Pardo, fanjakan'i Mato Grosso do Sul, tamin'ny taona 1990. Raha mieritreritra ianao fa natao hanakanana anao tsy hivarotra sôkôla mba handoavana ny fianaranao tennis ny ady atao amin'ny fampiasana ankizy, dia tsy nahatakatra na inona na inona ianao.
Avy amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana momba ny voka-dratsiny ny hevi-dison'ny fampiasana ankizy nozarain'ny ampahany lehibe ao amin'ny fiarahamonina breziliana, hoy ilay mpampanoa lalàna Patrícia Sanfelici, izay miasa amin'ny lalàna momba ny asa, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fampahalalam-baovao UOL. Sanfelici no mandrindra ny vondron'asa ao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izay miady amin'ny fampiasana sy ny fitrandrahana ireo ankizy sy ny tanora. Hoy izy:
Ny safidy mety sy sahaza ho an'ny ankizy iray dia ny fanabeazana sy ny fikarakarana mendrika azy ireo hatrany. Tsy afaka mieritreritra zavatra hafa isika. Miantoka ny fiarovana feno, tanteraka sy laharam-pahamehana ho an'ny fahazazana ny lalàm-panorenana breziliana. Raha fatantsika fa tokony harovana ny fahazazana, dia tsy maintsy miaro izany tanteraka isika.